Umthengisi weevenkile ezingama-43 kunye noMthengisi | IIMI
I-48V 350W emhlophe yokusebenza okuphezulu kwebhayisikile yamanenekazi
Ngelixa ukonwabela ukonwaba kokukhwela, kuya kufuneka ukhethe ukusebenza okuphezulu, into yokhuseleko oluphezulu kunye nebhayisekile entle yombane. Le yibhayisikile yombane eyenzelwe ngokukodwa abantu basetyhini, umzimba omhlophe ulula kwaye uyathandeka, ucocekile kwaye umsulwa, kwaye umthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza ngokuchasene nomqolo ongasemva, obalaseleyo
Umsebenzi wethu kukubonelela abasebenzisi kunye nabathengi ngezona zixhobo zikumgangatho ophezulu kunye nokhuphiswano lweebhayisikile zombane, ngenxa yamandla ethu e-OEM / ODM kunye nezisombululo ezinengqiqo, khumbula ukuthetha nathi namhlanje. Siza kuphuhlisa ngokunyanisekileyo kwaye sabelane ngempumelelo nabathengi bethu. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!
Umbala Bomvu / Mhlophe / OEM
Isantya esiphezulu 30km / h
Uluhlu 1: 1 imo yePAS, 30-60km
Imoto I-48V / 350W imoto engaxutywanga
Ibhetri 48V / 15.6Ah Lithium-ion ibhetri
Imoto enkulu engama-350W
Injini ye-hub engasemva eyi-350w ekwaziyo ukutyhala ibhayisekile yombane ngesantya ukuya kuthi ga kwi-30 km / h kumbane ococekileyo wombane.
Ibhetri ye-lithium engama-48V
Umthamo omkhulu we-15.6Ah 、 48V / 15.6Ah ibhetri ye-lithium njengombane wamandla, okuthetha ukuba kufanelekile ukukhwela ngokulula i-e-bhayisekile usuku lonke ngaphandle komcimbi. (30 km max uluhlu kumbane kuphela) 5-7hours yexesha lokutshaja kunye noyilo olungena manzi yenza ukuba ibhayisekile yakho ihlale ilula.
Imisebenzi emininzi yedijithali yesikrini esikhulu se-LCD3 isibonisi sedatha yebhayisikile. Njengamandla emoto, hlala ubhetri, isantya sokukhwela ixesha-lokwenyani, inqanaba le-PAS kunye nokunye.
I-disc eyi-disc eyi-160
I-brake ye-disc eyi-160 ibonelela ngamandla okuqhekeza kwivili langaphambili nangasemva. Nokuba ukwehla okanye ukukhwela yonke imihla, inokuyaphula ngokufanelekileyo ibhayisekile xa ucinezela i-levers yebhayisekile.
Isiphatho sesiphatho sokuthuthuzela isiqu sevalve, kulunge ngakumbi ukuphakama kwakho, makube namava akhululeke ngakumbi.
Egqithileyo Ihowuliseyili yamaTshayina entle yamanenekazi isitayile sokusebenza okuphezulu ibhayisekile yombane
Okulandelayo: Isakhelo esimhlophe sama-intshi ezingama-26 se-aluminium ibhayisekile yombane 60V 2000W imoto engenamsebenzi
Ibhayisekile emhlophe yombane Ukusebenza okuphezulu kwebhayisikile kagesi, Ibhayisekile yombane yamanenekazi, Ibhayisekile entle yombane, Ultralight ibhayisekile yombane, Ibhayisekile yombane ephathekayo